Ogaden News Agency (ONA) – Machadka Cilmi-Baadhista Ayaa Shahaadooyin Gudoonsiiyay Arday Qalinjabisay.
Machadka Cilmi Baadhista ee magaalada Garissa ayaa Guudoonsiiyay 21 Arday oo ka tirsan jaaliyada Barsan ee Somalida Ogadenia kuwaasoo kaqalin-jabiyay Koorsada Alifle.
Maamulka Machadka Magaalada Garisaa oo hawlo waxbarasho oo Kor loogu qaadahayo Tayada iyo Aqoonta Dhalinta, howl-wadeenada iyo dhamaan bulshada qaybaheeda ka duwan ee Soomaalaida Ogadenia ayaa la soo gabagabeeyay. Koorsada Alifle oo aheyd tii ugu danbeysay ee Ardaydu ka qalin jabiisay ayaa lagu baran hayay cashiro kala duwan, waxana kamid ahaa.
Culuumta Shareecada Islaamka.
Taarikhda Dalka Ogadenia iyo Midka Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia.
3) Xeerarka iyo Barnaamijka Siyaasiga ah ee JWXO.
Koorsadan Alifle ayaa lafuray bishii labaad sanadkan 2015-ka waxayna soo gaba-gaboowday bishii 7aad ee isla sanadkan. Koorsadan oy iska kaashadeen jaaliyada Barsan iyo macadka Cilmibaadhista ayaa uu hirgashay sidii loogu talagalay, waxayna soo saartay Arday tayo wanaagsan kuwaaso Noqon doona Hogaaminta iyo Laf dhabarta Halganka shacabka Somalida Ogadenia,
Dhankale Ardaydii ka qaliin jabisay Koorsada Alifle oon Microphone-ka la dhexqaadnay ayaa muujiyay farxad iyo Rajo balaadhan iyagoo ii raaciyay in Dhan walba ka dhismeen, waxayna aad ugu mahadcelin hayeen Maamulka FARACA BARSAN, iyo guud ahaan Jabhada JWXO Gaar ahaan Mahacadka Cilmibaadhista oo uu sahashay Koorsadan Alifle.
Dhan Kale FARACA BARSAN ee jaaliyada Ogadenia ayaa ku howlan inuu soo saaro, Arday intaas ka badan iyo waliba Hogaaminta Mustaqbalka ee Halganka shacabka reer Ogadenia. Koorsadan Alifle ayaa ku soo dhamaatay Farxad iyo Rayn Rayn aad uu baladhaan Waxaana Allah uga baryaynaa Ardaydii ka qalin jabiisay ineey noqdaan kuwo Halganka xaalad walba la gala una noqda Hormuud iyo Mustaqbalkii UMADA Gumaysiiga ku hoos jirta ee Somalida Ogadenya.